FLAC in Lugood: Sida loo Play Lugood FLAC on Mac (Mountian Libaaxa ka mid ah)
Ma waxaad raadineysaa wixii xal ah oo wax ku ool ah si loogu badalo FLAC in Lugood on Mac OS X, si aad u qaadan kartaa oo ka ciyaari FLAC ka kooban leheyn audio ee Lugood? Eeg dheeraad ah lahayn. Maqaalkani wuxuu sharxayaa in faahfaahinta sida loo xaliyo arrinta leheyn si aad u ciyaari karaa Lugood FLAC on Mac OS X (10.8 Mountain Libaaxa ka mid ah) iyadoo wax dhibaato ah.
Marka hore, kale oo la jecel yahay, waayo, plugin Lugood FLAC waa lagama maarmaan. Sida aan ognahay, Lugood ma garan karaan FLAC files audio. Sidaas daraadeed waxaad u leeyihiin in ay isticmaalaan Converter ah Audio u qalab Mac si loogu badalo files FLAC in qaab Lugood-friendly sida mp3. Ogsoonow in aad kala dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka halkan ka, inta badan, sababta oo ah waafaqsan ballaaran. Ka dib markii ay diinta ka Lugood FLAC, aad si guul leh dajiyaan karaa FLAC in Lugood on Mac si loogu isticmaalo wax kasta.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo FLAC in Lugood Iyadoo Wondershare Video Converter
Qeybta 2: FLAC Free in Lugood Converter
Qeybta 3: FLAC Online in Lugood Converter
Qeybta 1: Hel Best & Professional FLAC in ay Lugood Converter
Best FLAC Converter: Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo FLAC in qaabab ay caawinayso Lugood sida MP3 ama AAC. Sidoo kale waxa ay taageertaa dhan kale qaabab video kulul, oo ay ku jiraan MP4, AVI, MKV, MOV, FLV iyo in ka badan.
Tayada wax soo saarka Sare: Waxaad ka heli kartaa tayo leh wax soo saarka sare ee aan lossing tayada file asalka ah.
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed: The xawaaraha diinta 30 X ayaa la arkay dhaqso badan oo dhan tartamaya kale.
Great video editor: Waxaad u isticmaali kartaa si aad xaalkaa audio iyo videos leh hawlaha tafatirka classic sida falinjeeerka, lana siii, qoqobada, biirtay ama ku daray saamaynta, iyo in ka badan.
Guba video inay DVD: Waa aalad fiican ee aad u gubi audio iyo videos in qaab kasta oo ay u DVD, samaynta DVD ah xirfad leh arrimo badan DVD menu ..
Great video downloader: Waxaad qaadan kartaa qalab inay muusikada iyo videos ka YouTube, Facebook, Vemo iyo goobaha kale video qaybsiga.
Sida loo soo dejinta files FLAC in FLAC si Converter Lugood u Mac
1. Import DivX ama Xvid files barnaamijka
Si aad u dajiyaan files FLAC in app this, waxaad tagi kartaa File "> dar Media Faylal ay" ka menu ugu weyn ee ay caleenta aad disk adag tahay in ay doortaan files FLAC ah. Sidoo kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa hal ama dhowr FLAC files si software ah.
2. Dooro qaab Lugood-friendly sida MP3 format sida wax soo saarka
Riix labanlaab kor-arrow hoose ee Murayaad barnaamijkan ayaa, ka dibna tag Audio> "MP3". Wakhtigan, waxa kale oo aad sameyn kartaa buugga wax soo saarka, si aad u hesho files saarka sida ugu dhakhsaha badan diinta la dhammeeyo. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay riix Output bidix hoose ee suuqa kala barnaamijka lagu qeexi folder wax soo saarka.
3. U beddelaan FLAC in Lugood Mac OS X (Mountain Libaaxa taageeray)
Hit button badalo si ay u qabtaan diinta FLAC Lugood si hufan on Mac OS X. Habka aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah, taas oo inta badan ku xiran tahay tirada dhammaan faylasha FLAC laga keeno iyo waxqabadka your computer Mac ah.
Hadda, run ahaantii aad ka ciyaari kara FLAC in Lugood on Mac. Just jiidi oo hoos u files wax soo saarka (files .mp3) ka folder saarka maktabadda music Lugood ah. Sidaas, waxaad ka heli doontaa in aad dajiyaan karaa content warbaahinta FLAC in ay Lugood aan loo kala soocin.
# 1. FLAC Free in Lugood Converter: Wondershare Video Converter Free
Waa FLAC free dhamaystiran Lugood Converter, editor iyo downloader. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo FLAC in Lugood, edit files FLAC iyo donwload music aad jeceshahay online.
Pro: 100% FLAC si xor ah u Converter itune, fududahay in user user interface
1. Files Tayada gediyay laga yaabaa in laga badiyo.
2. Marka la barbar dhigo Video Converter Ultimate oo ka shaqeeya 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan, app taasi ma sida ugu dhakhsaha shaqeeyaan sida.
3. Tani FLAC si xor ah u Converter Lugood oggolaan karin in aad ku gubi video inay DVD.
3 siyaabood oo loo badalo si m2ts MOV on Mac
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan FLAC in Lugood on Mac (Yosemite ka mid ah)